पदलोलुप नारायणकाजी : जनतासंग सधै फेल, सत्तासंग सधै पास
नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता हुन । उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा समेत आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीसँग असहमति प्रकट गर्दै सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी महाधिवेशनस्थलमा पनि पत्रकार सम्मेलनबाटै फरक मत राख्ने ब्यक्ति हुन् । राष्ट्रियताका मुद्धामा भन्दै उनले पार्टीमा पटक पटक राखेका फरक मतलाई कतिपयले स्टन्ट देखाएर चर्चामा आउने दाउ भनेर समेत आलोचना गर्छन् ।
पार्टी भित्रै पनि जनयुद्धको ब्याज खान आएको भनेर आलोचित हुने गरेकाभएपनि नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना कुरा अडिगरुपमा सधैँ स्पष्टरुपमा राख्छन्, सार्वजनिकरुपमै राख्छन् । पछिल्लो समयमा नारायणकाजी करिव छ महिना मौन बसेर मुख खोलेको र सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गरेर चर्चामा छन् ।
१४ बर्षको उमेरदेखि राजनीतिमा होमिएका नारायणकाजी पब्लिक युथ कलेजको स्ववियु सभापतिदेखि देशको पराराष्ट्र र उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनेका नेकपा भित्रका छैठौं रोलक्रमका विरालकोटिका नेता हुन् । सामान्य परिवारका तर राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका गोर्खाली नारायणकाजी कांग्रेस नेता चीनकाजी श्रेष्ठका एकाकोखका भाइ हुन ।
चीनकाजी पूर्व कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुन् भने नारायणकाजी पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता हुन । दुई ध्रवमा राजनीतिको कित्ताकाटमा रहेपनि दाजुभार्इ बीच पारिवारिक खटपट छैन भन्छन यिनीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरू । पारिवारिक वातावरण बेदखल रहनु उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार र आदर्श नमुनाको रुपमा लिने संस्कार हो । वीपी कोइरालासंग सबाल जबाफ गर्दा बीपीले दिएको उत्तरसँग असहमति जनाउदै कांग्रेस राजनीति छोडेर बाम राजनीतिको यात्रातय गरेका श्रेष्ठ तीन पटक राजकाज मुद्दामा जेल गएका छन । पैतृक सम्पतिको रुपमा गाउँ गोरखामा केही रोपनी पाखो बारी रहेको र सो पनि पार्टी उपभोगको लागि २०५७ तिरै पार्टीलाई दिएको उनको कथन छ ।
घरभाडा, खाना खर्च, पार्टी कार्यक्रममा देशका बिभिन्न भागमा जाँदाको खर्च, गाडी भाडा लागायत उनका आधारभूत आवश्यकता पार्टीले पुरा गरिदिन्थ्यो । यस मानेमा उनी सच्चा कम्युनिस्ट सिद्दान्तका अनुयायी हुन सक्थे, महँगो कोसेली उपहार स्वीकार नगर्ने श्रेष्ठ समान्य कपडा, थोरै मूल्यका उपहार साथीभाइसँग स्वीकार गरेर आफ्नो जीवनयापन सहज बनाउने गर्छन तर सबै कुरा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हो भन्ने कुरा विभिन्न घटनाहरुले पुष्टी गर्छन, केहि समय अघि उनि टेम्पोमा हिड्ने गर्थे तर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफु चड्दै आएको गाडी दिएपछि उनि फुरुक्क भए !
अहम प्रश्न यहीँनेर छ नारायणकाजी सँग । के नारायणकाजी आफ्नो आर्थिक ब्यबस्थापन गर्नकै लागि राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा उमेद्वार बन्न लागेका हुन ? व्यक्तिगत इच्छा र आवश्यक्ता पूर्ति गर्नका लागि नै देशको राजकीय पदको दुरुपयोग गर्न राजी भएका हुन भने उनको सन्दर्भमा यो भन्दा नैतिकहीन कार्य अरु हुन सक्तैन ।
सर्वोच्च अदालतले चुनाब हारेकालाई संसद बनाउन नहुने फैसला पहिले नै गरिसकेको छ । झन् अपवाद होइन लस्करै चुनाब हारेका नातागोतासम्म नेताहरुले पार्नु घोर अनैतिक कार्य हो । जसको नेतृत्व सापेक्षमा असल भनिएका कमरेड नारायणकाजीबाट हुनु जस्तो लज्जास्पद अरु के होला ? यदि हैन भने किन जनताले पाँच वर्ष बन्देज गरेको संसदको ढोका छलेर झ्यालबाट राष्ट्रिय सभामा पुग्ने जमर्को गर्नुपर्‍यो ?
नारायणकाजी जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा सम्झौता नगर्ने अडान भएको नेता, विधी–पद्धती र सिद्दान्तमा अविचल रहने मान्छे कुन प्रयोजन र उपादेयता सार्थक बनाउन राष्ट्रिय सभा ताक्दै छन् ? जनताको फैसला अनुसार पाँच वर्षका लागि उनि अयोग्य हुन् । पाँच वर्ष कुरेर योग्यता थप्ने काम गर्नुपर्ने जनमतको उपेक्षा गर्दै राष्ट्रिय सभाको मान पदवीको लालच कत्तिपनि न्योचित छैन । चुनावी पराजय नै व्यक्तिको निष्ठा आदर्श र इमानको पराजय होइन । कानुनमा नलेखिएका सबैकुरा नैतिक नै हुन्छन भन्ने पनि छैन ।
कानुनमा एकपटक पराजित मान्छे अर्को आवधिक चुनाव नभएसम्म कतै उठन नपाउने बाध्यकारी स्थिति छैन । यद्यपी, बाबुरामसँग गोरखामा झन्डै सात हजार मतान्तरले पराजित भएर संघीय संसद्को ढोका जनताले बन्द गरिदिएको व्यक्ति उनि नै हैनन र ? गोर्खा उनि आफ्नै रहर र हर्षले बाबुरामलाई बाम गठबन्धनबाहिर पुर्‍याएर भिड्न पुगेको सत्य छिपेको छैन । संगति र पद्दतिको कुरा गर्ने, नैतिकता, इमान र आदर्श पच्छ्याउनेले , राष्ट्रिय सभामा अहिल्यै लोभ गर्न सुहाउछ ? मिल्छ ?
नैतिकता कानुन र चलनचल्तीको अभ्यास भन्दा ठुलो र फरक हुन्छ सबै राजनीतिक प्राणीसँग यो चिज नहुने भएकोले नै यसको महत्व, गरिमा उच्च भएको हो जुन तपाईबाट पनि देखिएन भने हाम्रो राजनीतिमा चाँदीको घेरा कहाँ छ भनेर विश्वास गर्नु । मानवीय स्वभावजन्य कमजोरी र नियतबस गरिने कमजोरी फरक कुरा हुन नियतिले चुनाव जिताउन ठगे पनि नियत खराब राखेर पदमा पुग्ने ध्याउन्न तपाईको चरित्रसँग कहिँ मेल खादैन । नेताको त्याग संघर्ष र जोखिम सँधै बन्दनीय छ । ।
देशमा सम्पन्न सबै निर्वाचनमा उनि जनताद्वारा अस्वीकृत छन् तर सत्ताको चास्नीबाट कहिले पनि टाढा छैनन् ! पटक पटक मन्त्री हुने उनि चरम गुटिए मानसिकताबाट ग्रसित भएको नेकपाकै नेताहरु बताउछन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण उनको भाग बाट हरहमेसा गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री बन्नु हो ! राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाको कार्यकाल सकिदै छ, नेपथ्यमा अर्को स्वर पनि सुनिन थालेको छ नारायणकाजी त्यता पनि जिब्रो मिठो पारिरहेका छन् ! ‘कम्युनिष्टको दरवार, जोगीको घरबार’ भनेर नयाँ उखान बनेको छ ! पाक्ने खिचडीको स्वाद जस्तो भएपनि जनताको जिब्रोले निको मान्छ ठान्नू महाभूल हो !